Igumbi Yokuhlala | December 2021
Iingcamango ezingama-50 zeGumbi lokuPhila eliKhuthazayo-Uyilo lweGumbi lokuPhila
Sebenzisa le mibono mihle gumbi lokuhlala lanamhlanje, nokuba unegumbi lokuhlala elincinci okanye indawo yokuhlala, njengendawo yokuqala yoyilo lwegumbi lokuhlala.
Ukulungiswa kwegumbi lokuhlala: Ngaba iisofa kufuneka zibekwe eludongeni?
Umbuzo oqhelekileyo wolwakhiwo- kodwa ithini impendulo?
Iingcamango zeGumbi lokuPhila ezili-19 eziGrey
Ngwevu iseyimbala 'engaphakathi', ke ukusuka kwifenitshala ukuya kupeyinta, khangela ezi zimvo zegumbi lokuhlala zingwevu ukuze uphefumlelwe.
Igumbi lokuhlala Igumbi lodonga-26 Iingcamango zeGumbi lokuPhila
Ngomfanekiso wegumbi lokuhlala, cinga ubungakanani begumbi. Landela ezi zimvo zephepha lodonga lokuhlala, ukusuka kwiipateni ezincinci zokuyila kuyilo lwakudala.
Igumbi lokuhlala, Igumbi lokuhlala, Igumbi langaphambili okanye iLounge- Ubiza ntoni kule ndawo yoLuntu?
Ngokutsho kukaJohn Lewis & Partner 'weZinto esiZenzayo kumagumbi ethu okuPhila (kunye nezinto esinqwenela ukuba singazichazanga), igumbi lokuhlala lelona gama lidumileyo elimele le ndawo, elandelwa ngokusondeleyo yindawo yokuphumla.
Isofa yokuqala yase-UK Kwibhokisi, i-Snug Shack, isandula ukwaziswa
Indawo yokuqala yase-UK 'isofa ebhokisini' i-Snug Shack iyakuthatha kuphela imizuzu emithathu ukudibana kungekho zixhobo kwaye akukho kungxola. Ukunikezela ngenkonzo ekhawulezayo yokuhanjiswa kweentsuku ezintathu, kukutshintsha komdlalo kwabo bajonge ukukhawulezisa izinto zabo zangaphakathi.
Izisombululo zokugcina igumbi lokuhlala: iiyunithi zemithombo yeendaba, iishelufu ezixhonywe eludongeni, iibhedi zeencwadi
Khetha uhlobo olulungileyo lokugcina kwindawo yakho yokuhlala
Izimvo ezi-6 eziphezulu zokuyila igumbi lokuhlala
Izimvo zoyilo kwigumbi lokuhlala eziyimfuneko ukukunceda ucwangcise indawo emangalisa ngokwenene
Uyenza njani isitayile isofa kwigumbi lakho lokuhlala
Ukukhetha isofa ekhangeleka intle kwaye uzive ucocekile kubalulekile, kodwa ungayijongi into enokubakho kwisitayile, ukusuka kwizityalo ukuya kwiitafile ezisecaleni.
Izikimu zemibala yegumbi lokuhlala
Yiphefumlelwe ukuba unike igumbi lakho lokuhlala ingqeshiso entsha yobomi ngokukhetha kwethu kwezona zimemo zimnandi, zicocekile nakwindlela yokuhlala egumbini lokuhlala.
Izimvo zetheyibhile yekofu- Uyenza njani indlela yokuChwetheza itafile yakho yeKofu njengePro
Abaqulunqi bangaphakathi kuHelen Green Design batyhila indlela yokunxiba kunye nokunxiba itafile yakho yekofu ekhaya njenge pro usebenzisa iincwadi, iimagazini, iintyatyambo kunye nezixhobo.
Ezi zezona zifanelekileyo zeIkea kwigumbi lakho lokuhlala -Ikea Corner Sofa, Ikea Sofa Bed, Ikea Armchair
Ngoluhlu lweesofa ze-Ikea ezithengiswayo kunzima ukuthatha isigqibo sokuba yeyiphi ifenitshala efanelekileyo kwigumbi lakho lokuhlala. Apha, uLuis Lopes, inkokeli yokuthengisa kwigumbi lokuhlala eIkea UK naseIreland, uthetha ngeyona sofa iphambili ye-Ikea, iibhedi zesofa, iisofa zekona kunye nezitulo zengalo yakho yokuhlala.
Itheyibhile esecaleni ye-Ikea ye-LÖVBACKEN Inokuba lixabiso lamawaka-Ifanitshala yeVintage Ikea
Itafile esecaleni ye-Ikea ye-LÖVBACKEN iphinde yakhutshwa, kunye namanye amaqhekeza amane njengenxalenye yokuqokelelwa kwe-Classical Re-Imagined Classics, kunye nexabiso elifanelekileyo kuhlahlo-lwabiwo mali lwe- $ 45 kwaye ngokweengcali ezithile, kunokuba yinto efanelekileyo kumashumi eminyaka ezayo.
Iindlela ezi-6 ezikrelekrele zokuguqula igumbi lakho lokuhlala
Igumbi lokuphumla kunye nokuzonwabisa kodwa ukuba igumbi lakho lokuhlala alinamoya ulungileyo, inokuba lixesha lokuba uphinde ucinge.
Ikhitshi le-diy lokuphelisa
Izidanga zentwasahlobo zomnyango wangaphambili
izimvo zokuhombisa ekhaya zeboho